ICosatu inike uNgqongqoshe isonto ukuthi asule | News24
ICosatu inike uNgqongqoshe isonto ukuthi asule
Cape Town – Umfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi, iCosatu usinike uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi, uBathabile Dlamini, isonto elilodwa ukuthi asule, kungenjalo uzobhekana “nombhikisho omkhulu ezweni” wokuthi akhishwe esikhundleni.
ICosatu ibibambe umbhikisho ngaphandle kwamasango asePhalamende ngeSonto nalapho ibiyoshiya khona uhlu lwezikhalo kwabamele iPhalamende.
Idlanzana labantu abangaphansi kuka-20 babambe iqhaza kulo mbhikisho.
NgoLwesithathu, iNkantolo yoMthethosisekelo yayalela uMnyango ukuthi ucacise ukuthi kungani ungeke ukwazi ukuhlangabezana nomnqamulajuqu wangomhlaka-31 Mashi wokuthi uzisingathele wona uhlelo lokuholelwa kwemali yesibonelelo sikahulumeni.
OLUNYE UDABA:INGOSI: Baningi asebezifunela ukubukwa ngolweSassa nemali yesibonelelo
Ngonyaka ka-2014, inkantolo yanquma ukuthi isivumelwano esikhona nenkampani esingatha uhlelo lokuholelwa kwabantu, iCash Paymaster Services (CPS), asikho emthethweni.
Ngokohlu lwezikhalo, lo mfelandawonye wezinyunyana ufuna ukuthi iHhovisi likaMengameli lithathe izinyathelo ezinqala ukuqinisekisa ukuthi imali yesibonelelo iyakhokhwa mhla lulunye ku-Ephreli; ukuthi iCPS iphenywe ngokwenkohlakalo; kanye nokuthi kudalulwe noma ngabe yikuphi ukuxhumana okukhona phakathi kwe-CPS nosopolitiki.
ICosatu ibe isinxusa uDlamini ukuthi asule ngokushesha esikhundleni “ngokuhluleka ukuhola uMnyango”, yaphinde yanxusa uMengameli Jacob Zuma ukuba amsuse esikhundleni uma enqaba ukuzisulela. Ithi uDlamini ube neminyaka emine ukuthi axazulule lolu daba kodwa wahluleka wancama.